बिहेअघि एकसाथ नबसेको बिषयमा यसो भन्छिन् दीपिका – Khabar Silo
बिहेअघि एकसाथ नबसेको बिषयमा यसो भन्छिन् दीपिका
नायक रणवीर सिंह र नायिका दीपिका पादुकोणको जोडीलाई बलिउडको सबैभन्दा सुन्दर जोडीको रुपमा लिइन्छ । उनीहरुले एक–अर्कालाई गर्ने सम्मानले पनि धेरैको मन जितेको छ । हालै उनीहरुले एकसाथ चलचित्र ‘८३’को छायांकन सकाएका छन् ।
चलचित्रको इन्डक्लाप पार्टीमा रणवीर र दीपिका नाचेको भिडियो अहिले सामाजिक संजालमा भइरल भइरहेको छ । जुन भिडियो हेरेका दर्शकले उनीहरुलाई जोडी नम्बर १ को ट्याग दिएका छन् ।
यस्तैमा दीपिकाले आफू र रणवीरको विषयमा नयाँ खबर बाहिर ल्याएकी छिन् । लामो समय प्रेममा रहेको यो जोडी ’लिभिङ टुगेदर’मा भने बसेन । किन उनीहरु लिभिङ टुगेदरमा बसेनन् ? धेरैको प्रश्न हुन सक्छ । यसै विषयमा दीपिकाले भनेकी छिन्–‘बिबाह अगाडि नै सबै कुरा थाहा भइसकेपछि बिबाहपछि के नयाँ हुन्छ त ? त्यसैले हामी लिभिङ टुगेदरमा बसेनौ ।’
रणवीर र दीपिका सहमतिमा नै लिभिङ टुगेदरमा नबसेका हुन् । दीपिका थप्छिन्–‘हामीले एक–अर्कालाई राम्रोसँग चिनेका थियौं । चिन्न र बुझ्नको लागि लिभिङ टुगेदरमा बस्नु नै पर्ने जरुरी थिएन । आखिर बिबाह हुने पक्का नै थियो । त्यसैले बिबाहपछि मात्र सँगै बस्ने निर्णय भएको थियो ।’
दीपिकाले रणवीरको बारेमा प्रशंसा गर्दै भनेकी छिन्–‘रणवीर यस्तो कलाकार हुन्, जसले हरेक चलचित्रमा आफूलाई परिवर्तन गर्न सक्छन् । मलाई त हरेक ६ महिनामा नयाँ श्रीमान् मिलेको जस्तो लाग्छ ।’ दीपिका आफूहरुले बैबाहिक जीवन निकै रमाइलो गरेर बिताइरहेको बताउँछिन् ।
बलिउडमा बिहे अघि नै लिभिङ टूगेदरको रुपमा रहने जोडी प्रशस्त छन् । तर, कतिपयको जीवन बैबाहिक जीवनमा परिणत भएको छ भने कतिपय अलग भएका छन् ।
एजेन्सी – साउथ फिल्मका निकै चर्चित अभिनेता हुन् पवन कल्याण । धेरैजसो एक्सन फिल्म ल्याएर चर्चामा आइरहने पवन कल्याण हुन् । साउथ फिल्म क्षेत्रमा महँगा अभिनेताका रुपमा चिनिएका पवनले एक फिल्मको १८ करोड भारू पारिश्रमिक लिने गरेको बताइएको छ । सन् १९९६ मा सायथ फिल्म अक्कडा अम्माई इक्कडा अभ्भईबाट फिल्म क्षेत्र सुरू गरेका उनी एक […]
Posted on March 16, 2021 March 16, 2021 Author khabar silo
एजेन्सी । अभिनेता सैफले केहि दिन पहिला एउटा अन्तरवार्तामा अमृता सिंहसँग आफ्नो डि-भोर्सको बारेमा बोलेका छन्। अन्तर्वार्तामा जब सैफलाई तपाईले आफ्ना बच्चाहरूलाई आफ्नो सम्बन्धविच्छेद बारे कसरी बताउनु भएको छ ? भन्ने प्रश्न सोधिएको थियो तब उनले भने, यो संसारकै नराम्रो चीज हो म अझै महशुस गर्छु। म चाहन्थे की म जे छु त्यो भन्दा फरक […]
बल्ल बोले मुन्द्रे, दिए यस्तो जवाफ, दीपक-दीपा टिमबाट निकालिएको बारे
Posted on November 13, 2020 Author khabar silo
मुन्द्रेको कमेडी क्लबका होस्ट जितु नेपाल अहिले विवा’दमा परेका छन् । मुन्द्रेको कमेडी क्लबमा अध्य’क्षता गरिरहेकी दिपा श्री निरौला वाहिरि’एपछि उनको कार’णले हो भन्दै चर्चा भएको छ । दीपाले महानायक राजेश हमालका वारेमा दिएको अभि’ब्यक्तिका कारण उनी विवा’दित भएपछि कार्य’क्रमवाट निकालि’एको हुनसक्ने अनुमान गरिएको छ । त्यस लगत्तै फेरी जितु नेपाललाई छक्का पञ्जा टिम’वाट निका:लिएको […]
नेपाल-म्यान्मा पर्यटनमा सहकार्य